Extended Day for Learning 2017 / Soomaali: Extended Day Learning
Waxbarashada Iskuulka ka-dib iyo Barnaamijka EDL
Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul (SPPS) waxay ardayda siiyaan fursado badan oo ay waxbarashada ku sii wadan karaan marka uu dhamaado xilliga caadiga ah ee iskuulka maalintii. Mid ka mid ah fursadaha ugu caansan waa (Extended Day for Learning, or EDL) oo ah Waxbarashada oo Maalintii La-dheereeyay, barnaamijkan waxaa bixiya Waaxda loo yaqaano Department of Alternative Education.
Barnaamijka EDL wuxuu ardayda siinayaa waxbarasho iyo nashaadaad kale labo maalmood toddobaad kasta (Isniin/Arboco ama Talaado/Khamiis) marka uu dhammaado xilliga caadiga ah ee iskuulka maalintii. Maalin kasta barnaamijka EDL wuxuu soconayaa hal saac iyo 45 daqiiqo, ardayduna waxay helayaan cunto fudud iyo waliba gaadiid/bas. Wax lacag ah lagaama rabo inaad ku bixiso barnaamijka EDL.
Ardayda barnaamijka EDL waxay helayaan taageero dhinaca xisaabta iyo akhriska ah – iyo waliba waxyaabo kale oo badan. Iyadoo ay ku xirnaan doonto heerka fasalka ardayga iyo iskuulka uu dhigto, ardayda qaarkood waxay ka qayb-gali doonaan barnaamijka FIRST Lego League, barashada qalabka muusikada, ama Freedom Schools Express. Barnaamijka EDL wuxuu ardayda siinayaa fursad ay ku samaystaan saaxibo cusub, ku horumariyaan xirfadahooda dhinaca iskuulka, isla-markaana ay ku noqdaan kuwo hal-abuur leh oo fir-fircoon oo caafimaad qaba.
Ma danaynaysaa barnaamijka EDL? Na la soo xiriir adigoo isticmaalaya barta iUpdate inta ka horreysa Sebteembar, 15.
Sidoo kale wax ka baro fursadaha kale ee waxbarasho ee baxa iskuulka ka-hor iyo iskuuka ka-dib.